Danjire Mahiga: “Uma dul qaadan doono cidii caqabad ku noqota xaaladda dalku marayo ee la dooonayo in ku meel gaarnimada looga baxo looma dul qaadan doono cid doonaysa inay danteeda siyaasadeed fushato”
Wakiilka Q,M u qaabilsan arrimaha Soomaliya danjire Augustina Mahiga oo ka hadlay xaaladda uu hadda dalku ku jiro ayaa waxaa uu digniinu
diray cid kasta oo loo arko inay carqaladayso hanaankalooga baxayo xaaladda KMG ee dalku hadda ku jiro.
Hadalkaan oo uu Mahiga ku warqad uu diray Soomaalida dibadaha ku nool ayaa waxaa uu tilmaamay in xilligaan kadib aysan beesha caalamku u dul
qaadan doonin in carqalad lagu abuuro qorshaha hadda socda ee la doonayo in dalka looga saaro ku meel gaarinimada loona gudbo dawlad
buuxda oo uu wadanku yeesho.
Danjire Mahiga waxaa uu xusay in xisbiyada siyaasadeed iyo shaqsiyaadka kale oo doonaya inay qasaandoorashooyin madaxtinimo ee
lagu wado in dhawaan dalka ka dhacaan ay beesha caalamku ka qaadi doonto tilaabo lagu ciqaabayo.
“Uma dul qaadan doono cidii caqabad ku noqota xaaladda dalku marayo ee la dooonayo in ku meel gaarnimada looga baxo looma dul qaadan doono
cid doonaysa inay danteeda siyaasadeed fushato” ayuu yiri Augustina Mahiga oo Q,M u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana uu inrtaa ku
daray Soomaaliya ay dhibaato ugu filantahay mudada 20 sano ka badan ee ay qaska ku jirtay.
Mahiga waxaa uu dhanka kale ka dalbaday Soomaalida qurbo joogta ah inay dooorkooda ka qaataan dadaalada la doonayo in Soomaaliya ku hesho
dawlad buuxda oo ay ka baxdo KMG sida uuyiri waxaana uu tilmaamay in la joogo waqtigii ay Soomaalida dibadaha jooga ay ka shaqeyn lahaayeen
mustaqbalka wadanka .
“Caalamku hadda wuxuu u diyaarsan yahay in Soomaaliya cagaheeda isku taagto ee yka faa’idaysta” ayuu sidoo kale Wakiilka Q,M ee Soomaaliya waxaa uusidoo kale soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin halka uu marayo qoraalka dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya iyo hawlgalada ay ciidamada dawlada, kuwa AMISOM ka wadaan gobolo ku yaala Soomaaliya iyo arrimaha Road-Mapka.
Q,M iyo dawlada Maraykanka ayaa horey digniin ugu diray shaqsiyaad ay ugu yeereen inay qas ku hayaan qorshaha Roadmapka